ဘင်္ဂါလီတွေ နေရပ်မပြန်အောင် တိုက်တွန်းတဲ့ အုပ်စုတွေ ရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဘင်္ဂါလီတွေ နေရပ်မပြန်အောင် တိုက်တွန်းတဲ့ အုပ်စုတွေ ရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ပြော
ဘင်္ဂါလီတွေ နေရပ်မပြန်အောင် တိုက်တွန်းတဲ့ အုပ်စုတွေ ရှိတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းရောက် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေကို နေရပ်မပြန်အောင် တိုက်တွန်းနေတဲ့ အုပ်စုတွေ ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်မိကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောပါတယ်။
တချို့က ပြဿနာကို ပြေလည်မှာ စိုးရိမ်တဲ့သူတွေ ရှိကြောင်း၊ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မလုပ်ဘဲ ပိုပြီး ခက်ခဲရှုပ်ထွေးလာကာ နိုင်ငံတကာ အာရုံစိုက်မှု ရအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူတွေရှိကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က မနေ့က ဇန်နဝါရီ ၂၃ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ နှစ်ရပ်က ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ တချို့က နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို ပို အသုံးပြုချင်တဲ့အတွက် ပြဿနာကို ပိုရှုပ်ထွေး၊ ကြီးမားအောင် လုပ်တာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောပါတယ်။
……………………. ။ ။…………………….
ဘင်ျဂါလီတှေ နရေပျမပွနျအောငျ တိုကျတှနျးတဲ့ အုပျစုတှေ ရှိတယျလို့ ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ ပွော
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီ မှတျစလငျတှကေို နရေပျမပွနျအောငျ တိုကျတှနျးနတေဲ့ အုပျစုတှေ ရှိတယျလို့ သုံးသပျမိကွောငျး အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျက ပွောပါတယျ။
တခြို့က ပွဿနာကို ပွလေညျမှာ စိုးရိမျတဲ့သူတှေ ရှိကွောငျး၊ ပွဿနာကို ပွလေညျအောငျ မလုပျဘဲ ပိုပွီး ခကျခဲရှုပျထှေးလာကာ နိုငျငံတကာ အာရုံစိုကျမှု ရအောငျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနသေူတှရှေိကွောငျး ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျက မနကေ့ ဇနျနဝါရီ ၂၃ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အစိုးရ နှဈရပျက ပွဿနာကို ပွလေညျအောငျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနကွေောငျး၊ တခြို့က နိုငျငံတကာ ဖိအားကို ပို အသုံးပွုခငျြတဲ့အတှကျ ပွဿနာကို ပိုရှုပျထှေး၊ ကွီးမားအောငျ လုပျတာတှေ ရှိတယျလို့လညျး ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျက ပွောပါတယျ။
Previous articleမြိတ်ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ အနံဆိုးထွက်မှုလျော့ချထားတာပြည်သူကိုရှင်းလင်း (ရုပ်/သံ)
Next articleMCN နေ့စဉ် မနက်ခင်း သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့